Galmudug oo qabatay ruux lagu eedeynayo in uu wax ka ogaa Kufsi iyo dil ka dhacay Muqdisho
MUQDISHO(P-TIMES) – Laamaha Ammaanka ee Booliska Soomaaliya ayaa shaaciyey in ay ciidamada Booliska ee Galmudug gacanta kusoo dhigeen eedaysane lagu eedeynayo in uu wax ka ogaa Kufsi iyo dil loo geystay marxuumad Xaliima oo ahayd gabar lagu dilay laguna kufsaday magaalada Muqdisho ee caasumada Soomaaliya.
Booliska ayaa sheegay in ay Eedaysanahan laga soo qabtay magaalada Cadaado ee Galmudug, markii uu halkaas u baxsaday iyadoo la qabtay qaar kamid ah dadka lagu eedeynayo in ay falkan wada geysteen.
Taliye kuxigeenk ciidamada Booliska Soomaaliya Zakiya Xuseen ayaa sheegtay in ay iskaashiga labada dhinac awgeed uu guuleystay howlgalkan oo hadda eedaysanahan uu ku jiro gacanta laamaha Ammaanka ayna baaritaano ku socdaan.
Booliska Faderaalka ayaa bilaabay baaritaanada dadka loo haysto in ay ka dambeeyeen dilkii iyo kufsigii foosha xumaa ee gabar Soomaaliyeed loogu geystay guri kuyaala magaalada Muqdisho ee caasumada dalka, waxaana ilaa hada ay hayaan cadeymo sida ay sheegeen.
Dawladda Faderaalka ayaa si weyn indhaha loogu hayaa sida ay u maareyn doonto dhacdadan, horey dhacdadan oo kale ayaa uga dhacday magaalada Gaalkacyo ee Puntland, dadkii ka dambeeyey ayaa la maxkamadeeyey laguna fuliyey Dil qisaas ah, iyadoo laga sugayo dhanka Faderaalka go`aanka ay hadda qaadi doonaan.